Madaxweynaha Dowlada Soomaaliya Oo Safarkiisii Ugu Horeeyay Dalka Kaga Baxay Login with Facebook
Ali Muse Alixzaan Masjid Al-Taqwa Daarulcilimi Somali Sunah naseexo Baro Quraanka maQal iyo muQaal Cilmi Sh Maxamed Cabdi Umal addacwah Somali Quraan Qubacentre Boqolsoon Hanuun Aflax Madaxweynaha Dowlada Soomaaliya Oo Safarkiisii Ugu Horeeyay Dalka Kaga Baxay
Madaxweynaha Dowlada Soomaaliya ayaa ka dhoofay Magaaladda Muqdisho iyadoona safarkiisii ugu horeeyay ee dhanka dibada ah uu aaday.
Madaxweynaha ayaa diyaarad ka raacay garoonka diyaaradaha Muqdisho waxaana uu kusii jeedaa Dalka Uganda.
Xasan Sheekh Maxamuud ayaa u aaday Magaaladda Kampala ee Dalka Uganda inuu ka qeyb galo 50-sano guuradii kasoo wareegatay markii Dalka Ugandha ay qaateen xurnimada.
Inta uusan garoonka ka bixin ayuu Saxaafada lahadlay waxaana uu sheegay in Uganda lagu casuumay kana uu qeyb gali doono Munaasabada sanad guuradii 50-aad ee xoriyada Uganda.
Waxaa safarkiisa ku wehliya xubno katirsan Dowladii waqtigeedu dhamaaday iyo mudanayaal kale oo Xildhibaano ah.
Waa socdaalkii ugu horeeyay ee Madaxweyne Xasan Sh Maxamuud u kaga baxo dalka.Name Email Subject Comment 1000 Characters leftAntispam protection